Toddobaad kasta oo dhaafta, waxaa jira wax kayar imaatinka bisha Maarso, oo ah bisha ay tahay Apple inay abaabusho muunad lagu soo bandhigi doono - iPhone 5se cusub, wararkii ugu dambeeyay Waxay tilmaameen in iPhone 6c iyo loogu yeedhi doono 5se iyo iPad Air 3 cusub, laakiin aan waxba ka ahayn Apple Watch 2. Maqnaanshaha Apple Watch 2 maahan wax layaab leh, maxaa yeelay illaa iyo dhowr bilood ka hor, Apple smartwatch ayaan wali laga helin dalal dhowr ah mana doonayo in isla wixii ku dhacay iPad 3 iyo iPad 4 inay dhacaan, in wuxuu aaday suuqa wax ka yar lix bilood marka loo eego.
Toddobaadkan, a fikradda cusub ee iPhone 7 oo leh iOS 10, isku-dar ah, in haddii ay runti tahay nooca Apple ay suuqa ka soo saartay Sebtember, waxay noqon laheyd kacaan dhameystiran. Isagoo ka hadlaya iPhone, Apple waxaa laga yaabaa inay joojiso inay ku iibiso qalabkeeda calanka California, haddii la soo saaro sharci cusub oo doonaya in loo oggolaado dowladda in ay gasho qalabkooda, taas oo shirkadda Apple ay mar walba diidan tahay in ay sameyso.
Haddii aan kahadalno codsiyada, Toddobaadkan Apple ayaa qaab noo siisa bilaash ah barnaamijka Marco Polo, Ugu yar guriga. Intaa waxaa dheer, Apple waa ku bixinaya qiimo dhimis ballaaran barnaamijyada wax soosaarka ee App Store, markaa waa wakhti fiican haddii aan raadineynay mid ka mid ah codsiyadaas oo had iyo jeer u muuqday xoogaa qaali ah. Facebook ayaa mar kale cusbooneysiisay barnaamijka iOS ku darista shaqooyinka cusub ee taabashada 3D, Waxay umuuqataa inay iyagu lahaayeen ama uun jeclaadeen.
Kahor imaatinka macruufka 9, wararka la isla dhexmarayo ayaa lagu sheegay bixitaanka suurtagalka ah ee Google inuu yahay mashiinka raadinta asalka ah ee Safari ee iOS, iyo in Bing ama Yahoo ay qaadan karaan booskiisa. Laakiin wax walba waa ganacsi oo Google ma jiro sababtoo ah dadka isticmaala way jecel yihiin, laakiin waa heshiiska qarsoodiga ah ee ay wada gaareen labada dhinac iyo taas waxay kasbatay Apple dakhli dhan $ 1.000 bilyan.
Haddii aan ka tagno Mareykanka, waxaan arki karnaa sida Apple uu hadda daah furay a xarunta horumarinta arjiyada ee Talyaaniga si ay dhammaan kuwaas horumarineed ee reer Yurub ay awoodaan barnaamij dhammaystiran oo ku qoran luqadda IOS. Weli kama tagno Talyaaniga, maxaa yeelay Tim Cook wuxuu soo maray Vatican-ka si uu ula kulmo Para Francisco.
Steve Zadesky, maareeyaha mashruuca ee mashruuca Titan, ayaa ka tagay Apple